Xildhibaan Xidig oo ku baaqay in la dhiso Guddiga Doorashada Madaxweynaha Jubbaland – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, oo jooga magaalada Kismaayo ee Xarunta Ku-meel-gaarka u ah Jubbaland, ayaa sheegay in isaga, oo u ah musharrax Xilka Madaxweynaha Jubbaland, iyo Madaxweynaha hadda ee maamulkaas, Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe), ay ka wada hadleen iney doorashada Madaxweynaha Jubbaland ay u dhacdo si xor iyo xalaal ah.
Waxa uu sheegay in Axmed Madoobe, oo isna xilkaas doonaya markale, ay ka wada-hadleen iney Doorashada Madaxweynaha Jubbaland ay ku dhacdo waqtigii loogu talogalay, iyada oo amaanka aad loo sugayo. “Waxaan rajeynayaa inaan Ololaha Doorashada dardar gelin doonno xiliga ay ku haboonaato, anagoo tixgelin doonna Tilmaamaha Haayadaha Amniga Jubbaland” ayuu Xildhibaan Xidig ku yiri dhigaal uu ku soo qoray Feysbuuggiisa.
Xil. Xidig iyo MW Axmed Madoobe oo la sawirayo iyagoo isa salaamaya
Xidig waxaa kaloo uu sheegay inuu Madaxweynaha Jubbaland ku booriyey inuu deg deg u magacaabo Guddiga Doorashada Madaxweynaha Jubbaland. “Madaxweynaha Jubbaland waxaan ka rajeynayaa inuu degdeg u magacaabi doono Guddiga Doorashada iyo Xuduudaha” ayuu yiri Musharrax Madaxweyne Jubbaland, Cabdirashiid Xidig.
Xildhibaan Cabdirashiid Xidig, oo maalmahaan u joogay Kismaayo, una tagay halkaas inuu kaga dhawaaqo inuu u sharraxan yahay xilka ugu sareeya Dowlad Goboleedka Jubbaland, ayaa markii uu halkaas tagay la soo wariyey in laga hor istaagay iney Garoonka Diyaaradaha Kismaayo kusoo dhaweeyaan taageerayaashiisa, kuwaas oo uu ugu baaqay in ay u diyaar garoobaan Ololaha Doorashada Madaxweynaha Jubbaland.